Ukusekela - iFunlandia
Sinikeza ukusekelwa okuphelele futhi uzojabula ukwazi ukuthi sihle kakhulu kukho.
Ngedizayini nethimba le-R & D labantu abacishe babe ngama-50, iFunlandia ibeka imikhiqizo phambili futhi ithuthukisa izinhlobo ezingaba yinkulungwane zamaphrojekthi wokuzijabulisa wayo yonke iminyaka kusuka ku-100㎡ kuya ku-10,000㎡.
Sisungule uhlelo loqeqesho oluqeqeshiwe, oluvuthiwe futhi oluhlelekile ukusiza amaklayenti aqeqeshe abasebenzi bawo abaphambili ukuthi bathole umsebenzi ngokushesha. Siphinde siqinisekise ukuthi amaqembu wethu wokusebenza amaklayenti anamakhono okusebenza afanelekile futhi angasebenza ngokushesha nangempumelelo.
Ngokuya ngezimpawu zebanga lamakhasimende ethu, sakha izinhlelo zebhizinisi eziqondile nemithetho yokusetshenziswa kweklayenti ngalinye, sinikeze ngezinsizakalo zokumaketha nokukhangisa online ukunweba ithonya lamaphrojekthi wamakhasimende ethu asanda kuvulwa endaweni yendawo, evumela amaklayenti ethu ukuthi qala ibhizinisi, thola amakhasimende amasha bese ugcina amadala.
Eminyakeni eyi-15 edlule, sisebenzise amaphrojekthi angaphezu kwe-1000, sifinyelela emindenini eyizigidi ezingama-20 ejabule emazwenikazi ayisithupha emhlabeni jikelele. Ngasikhathi sinye, kuhlanganiswe nohlelo lokuphatha olujwayelekile kanye nethimba labasebenzi abangama-200, sinikeza amaklayenti ethu izindlela zegolide ezingama-35 ezisebenza ukubasiza ukuthi bakhulise izinzuzo zabo.
Copyright 2010-2021 funlandia.com Wonke Amalungelo Agodliwe. Hot ProductsIbalazweIzingane Zabakhiqizi Bendawo Yokudlala, Izindleko Zasendlini Yokudlala Yangaphakathi, Izinsiza kusebenza ze-Adventure Indoor Playground, Dlala Izinsiza Zezingane, Ukwenziwa kweTrampoline Park, IBig Air Trampoline Park Franchise,